Sawirro: Muxuu yahay ujeedka ka dambeeya inay Muqdisho soo gaaraan wafdiga Qadar? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Muxuu yahay ujeedka ka dambeeya inay Muqdisho soo gaaraan wafdiga Qadar?
Sawirro: Muxuu yahay ujeedka ka dambeeya inay Muqdisho soo gaaraan wafdiga Qadar?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo horumarinta dhaqaallaha H.E. Amb. Gamal Mohamed Hassan, Wasiirka Amniga gudaha H.E. Mr. Mohamed Abukar Islow iyo Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga H.E. Mr. Mukhtar Mahad Daud ayaa maanta si diirran ugu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Qatar oo uu hoggaaminayay Mr. Khalifa Jassim Al kuwari oo ah Agaasimaha guud ee Sanduuqa Qatar ee horumarinta.
Wafddigan ayaa waxaa ay kulan kula leeyihiin Ra’isalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo ams’uuliyiinta kale ee xafiiska Ra’isalwasaaraha Soomaaliya.
Xubnaha ka socda Dalka Qadar waxaa ay gaarayaan Shan Xubnood,waxaana ay Muqdisho kulan kula leeyihiin Ra’isalwasaare Kheyre.
Socdaalka wafdigan ayaa jawaab u ah xiriiro kala duwan oo Wasaaradaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Qatar ay lahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay si loo taabageliyo maashaariic horumarineed oo dhaxalgal ah,wayna la kulmi doonaan Ra’iisul Wasaare Xasan Cali kheyre.